Librotea, usoro ikpo okwu nke ndi na-agu akwukwo na ndi na ere akwukwo | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Librotea, ikpo okwu di elu maka ndi na agu akwukwo na ndi na ere akwukwo
Cover Cover nke Librotea.
Maka ụlọ ahịa akwụkwọ obere ma ọ bụ ọkara ọkara enwere ihe abụọ na-eme ka ịdịgide na ịdị adị ha gharazie. N'otu aka, n'ụzọ ezi uche dị na ya, mba na-adighi agu akwukwo bu obodo nke na anaghi eri akwukwo ya mere ndị na-ere ahịa na-ere ihe a "dị ịtụnanya" anaghị enweta uru ọ bụla.
Ọ bụrụ n ’ihe a niile anyị gbakwunyere agaghị ekwe omume n’akụkụ nke ndị na - agụ akwụkwọ ole na ole iji kesaa dịka akụ na ụba dị n’akwụkwọ ndị a, anyị nwere ike ịkọwa nke ahụ, A na-amanye ọtụtụ ụlọ ahịa akwụkwọ imechi ọnụ ụzọ ya n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
Eziokwu a abawanyela ma ọ bụ mee ngwangwa site na ntoputa nke onye asọmpi ọhụrụ maka onye na-ere akwụkwọ agbata obi. A osompi ọzọ na-emegharị ka ọhụrụ eziokwu dabere na netwọk dị ka nnukwu mpaghara ịzụta na ịchọta ihe niile ịchọrọ.
Ana m ekwu, n'ezie, gbasara nyiwe mebere. Oghere ndị a anaghị enye gị ohere ịchọta ederede niile n'otu pịa na onye chọrọ ma, n'ọtụtụ oge, akwụkwọ ndị ahụ na ọnụahịa dị ọnụ ala karịa akụ na ụba, ihe na-eme ka onye zụrụ ya zaa.
Asọmpi nke ọtụtụ ụlọ ahịa na-ere akwụkwọ enweghị ike ibute na nke butere, dịka anyị kwurula, na-apụ n'anya nke ọtụtụ n'ime ha ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị bụ ndị, tupu ha enyocha ma mebie ha, ha na-ahọrọ iji nweta ụlọ ahịa dị ukwuu iji zụta akwụkwọ ha chọrọ.
Agbanyeghị, El Pais abanyela na nkwekọrịta mmekọrịta ya na Guild nke ndị na-ere akwụkwọ na Spain (Cegal) , si otú etinye ihe na ngwa Librotea (nke Mba mepụtara) ọbá akwụkwọ niile edebara aha na njikọ a.
Librotea, maka ndị na-amaghị ya, bụ akwụkwọ nchọta na ntinye akwụkwọ Na, n'ihi mmekọrịta a, site ugbu a gaa n'ihu, ọ ga-enye ndị ọrụ ya ohere ịchọ akwụkwọ na igwe nyocha nke na-eme ka obere ụlọ akwụkwọ obere na ọkara buru ibu na Spain niile.
Na nke a, akwụkwọ na-atụ aro na-akara ọ dị iche site na oghere ndị ọzọ site na ịkụ nzọ n'ọdụ akwụkwọ na agbata obi ụlọ akwụkwọ na-abụghị ndị dị adị dị ugbu a.
N'ụzọ dị otú a, site na geocolocation nke ụlọ ahịa ndị a, ị nwere ike ịmata ebe kachasị nso ebe ị nwere ike ịzụta otu ma ọ bụ akwụkwọ ọzọ. Ngwaọrụ dị egwu nke na-ewetara anyị nso na ebe a na-ere akwụkwọ na obodo ma ọ bụ obodo anyị ma na-enye ndị a ohere ime ka ndị ahịa mara ha.
N'ọnọdụ ọ bụla, ngwá ọrụ ahụ abụghị naanị na-elekwasị anya n'ịchọ na ịzụta akwụkwọ kamakwa na ịmepụta obodo nke ndị nwere mmasị ịgụ ihe. Na oghere a, ya mere, site ugbu a gaa n'ihu Ndị na-ere akwụkwọ n'onwe ha bụ ndị ga-emepụta akwụkwọ nkọwa maka akwụkwọ ọ bụla, yana ndị mmadụ ndị ọzọ sitere na ụwa akwụkwọ ma ọ bụ ọdịbendị, ha nwekwara ike ịmepụta ndụmọdụ nke aka ha..
N'oge na-adịghị anya ọ rụ ọrụ, mmadụ 30.000 edebanyela aha na Librotea, ọnụ ọgụgụ ga-eto eto ka anyị na-agụ akwụkwọ mara nnukwu oghere a.
A ga-enweta akwụkwọ edemede ọhụrụ nke ngwa ahụ site na nyocha ọchụchọ Cegal www.todostulibros.com, nke ga-egosi na N'efu. Ana m akpọ ndị niile na-agụ akwụkwọ Akwụkwọ akụkọ iji gbalịa mata ngwa ọrụ ọhụrụ a. Ọbụghị naanị ka ibanye n’otu ọdee akwụkwọ mana ka inye ụlọ ahịa ebe dị iche iche ohere.
Slọ ahịa ndị, n'agbanyeghị ajọ ihu igwe a na-amanye ha ihu, na-ala azụ ịla n'iyi na ụwa na-anaghị agụ ma na-adịghị eri akwụkwọ. Na mba ebe, Dabere na data kachasị ọhụrụ, 35% nke ndị bi na ya kwetara na ha anaghị agụ ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agụghị.
Ọ dị n'aka anyị, ịga n'ihu na-ekwenye na ịdị adị ya ebe ọ bụ na, na nkenke, ụlọ ahịa na-anọ ma bụrụ ebe ewusiri ike na ọgba ebe ndị niile na-ebi akwụkwọ akwụkwọ n'aka anyị, anyị na-enweta ogo nke nkwekọ na obi ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Noticias » Librotea, ikpo okwu di elu maka ndi na agu akwukwo na ndi na ere akwukwo
Edere m n'obodo Veracruz, Ver., Mexico.
Na ngalaba nkebi enwere isi okwu abuo na akwukwo; Enweghị onye n'ime ha m nwere ike ịhụ ndekọ na aha, ekwentị, ozi ịntanetị, oge awa, onye ogbugbo, ebe ma ọ bụ adreesị ebe ,lọ, okirikiri ma ọ bụ otu ọgụgụ nke otu obodo na-ezukọ, n'ihe banyere ọbịbịa gị ma ọ bụ site na ọrụ, azụmahịa ma ọ bụ njem, ka anyị mata ebe m ga-aga ma kara aka oge m n'ịkwalite na ịkwalite ọgụgụ.
N'ihe banyere nke adịghị adị, m na-atụ aro ma na-atụ aro ụzọ iji tinye ma guzobe ndekọ ọha na eze iji mepụta ndekọ aha na aha, ekwentị, ozi ịntanetị, oge awa, onye ogbugbo, ebe ma ọ bụ adreesị nke Readinglọ Ọgụgụ site na obodo, mba na ụlọ ọrụ ọha ma ọ bụ nkeonwe.
Ọ bụrụ na akwadoro atụmatụ ahụ, tinye akara dị ka Readinglọ Ọgụgụ iji nweta yana ndị ogbugbo ahụ na-abanye data a chọrọ ma ọ bụ ndị ha nwere ike itinye na mmelite.
M na-ekwughachi ya na mmekorita nke ezi mmasị gị.
Zaghachi Juan Carlos Ocampo Rodríguez
Dika ekwuru okwu ojoo, nye ndi dere ya na ndi isi akwukwo ma obu mmiri akwadoghi anyi. Agbanyeghị, akwụkwọ ikpeazụ m bipụtara (nke iri), Nobel Ediciones deziri ya. Isiokwu ya bụ: "Na nzuzo." Akụkọ 96 dị ntakịrị, 2018. ISBN: 978-84-8459-732-2. E sere foto nke osisi na-enweghị osisi nke onye dere ya mere n'onwe ya: Alberto Carlos Polledo Arias. Ọnụ, euro 15. Will ga-ahụ ya n'anya!
Na ibe ya ọ bụla akụkọ gbanyere mkpọrọgwụ nke mmetụta nke edemede na nsụgharị nke asụsụ ga-etinye n'ime uche gị site na mgbawa zoro ezo n'azụ ákwà mgbochi nke igwe ojii na-awagharị.
Zaghachi Alberto Carlos Polledo Arias
Ajụjụ ọnụ Dolores Redondo, onye mmeri nke onyinye 2016 Planeta